Button Alwaax, Button Jeans, Qalabka Ciyaaraha - Nolosha Eco
Bedka oo dhan waa qiyaastii 3500 mitir murabac. Waxaan sidoo kale leenahay xafiis laan ku yaal Nanchang, Jiangxi.
Shirkadeena waxay leedahay nidaam xakameyn tayo leh oo aad u adag. Waxaan marwalba ku adkeynaa 100% kormeerka tayada iyada oo aan loo eegin alaabta ceeriin ama alaabooyinka la dhammeeyay.
Shirkadeena waxay leedahay xuquqda soo dejinta iyo dhoofinta iyo sidoo kale khibrad baahsan oo caalami ah iyo wax dhoofinta.
Waxaan bixin karnaa adeeg dhanjistikad ah, keydinta iyo adeegga dhoofinta. Nidaamyada ballansashada internetka ee horumarsan waxay hubinayaan waxtarka sare iyo ka shaqeynta xogta saxda ah kana fogow walwal kasta oo macaamiisha ah.
Tayada Sare caaga gacanka for Dambiisha / boorsooyinka ...
Qufulka Birta Qalabka Birta Raaxada ah
Rinjiga Birta Magnetic Clasp Magnet Button For Clo ...
Shandad hardware boorsada qalabka accessories silsilad bir ...
Badhanka Zinc Alloy Custom
suunka birta ah
Xidhkaha laastikada leh
-Xidhkii dunta caag Bra Garabka suunka
Buckles Birta / clips biraha
Kalkaaliyeyaasha xannaaneynta qalabka xannibaadda cajaladaha hooyada ah
Xadhig Xiritaanka Caaga ah
Jillaab Iyo Taabashada Indhaha
Fiilooyinka Fudud ee Fudud, Nylon Dahaarka Bra Subw ...
Xadhig Clip garter
Qufulka Kaabsoolka Kabaha
Kabaha Shaati Charms Tags
Kabaha Dahabka ah ee biraha Dahabka ah
Kabaha Birta ah
Giraanta furaha alwaaxa xayeysiiska ah / keyring alwaax / alwaax ...
Eva Keychain sabayn keychain